Rahoviana no tokony hamerenanao ny endriny? | Martech Zone
Rahoviana no tokony hamerenanao ny endriny?
Alakamisy, Jona 25, 2015 Alakamisy, Jona 25, 2015 Douglas Karr
Ny ekipa avy Clear Designs dia namoaka an'ity sary tsara tarehy ity miaraka amin'ny eritreritra manodidina ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fanavaozana ny sary famantarana, ny antony tokony hamerenanao endrika, ny sasany tokony hatao ary ny tsy tokony hatao amin'ny famerenana endrika, ny hadisoan'ny famolavolana sary famantarana sasany, ary ny hevitra sasany avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria.
telo Antony efatra hanamboarana endrika ny Logo anao
Merger orinasa - ny fanakambanana, ny fahazoana na ny fihodinan'ny orinasa dia matetika no mila logo vaovao hanehoana endrika an'ilay orinasa vaovao.
Ny orinasa dia mitombo mihoatra ny maha-izy azy tany am-boalohany - ho an'ny orinasa iray manitatra ny tolotra omeny, toy ny fampidirana vokatra, serivisy, sns.
Famelomana indray ny orinasa - orinasa efa ela ary mety mila logo.
Te hanampy antony hafa aho! Ny viewports finday sy ny takelaka nomerika misy famaritana avo dia nanova tanteraka ny fomba fahitana ny sary famantarana anao. Tapitra ny andro fiantohana ny sary famantarana anao miloko mainty sy fotsy amin'ny milina fax.
Ankehitriny, manana English ilaina fa mety azo jerena amin'ny 16 teboka amin'ny 16pixels… saika tsy azo atao ny mijery tsara. Ary mety hiakatra hatramin'ny sary amin'ny fisehoana retina amin'ny 227 teboka isaky ny santimetatra. Izany dia mitaky asa famolavolana tsara tarehy hahitsiana azy. Ny fanararaotana ireo efijery famaritana avo lenta dia antony mitombina, araka ny hevitro, hahazoana logo vaovao novolavolaina!
Raha mbola tsy namolavola ny logoo ianao tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia mety ho antitra ho an'izay manao fikarohana amin'ny Internet (izay saika ny olon-drehetra!) Ny logo anao.
Tags: clearviewsary infographicfamolavolana sary indraysary famantarana redesign logoredesign
Diso izy ireo… Tsy ampy ny fandefasan-kafatra
Varotra Broadleaf: fampiasam-bola amin'ny fanaingoana fa tsy fahazoan-dàlana